အသည်းယားစရာ အတွင်းသားအလှတွေကို လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Zartiman
အခု ဆိုရင် လည်း ဆောင်းယွန်း ဟာ ရှုတင်နားတုန်း လေးမှာ ချစ်စရာ မခို့ တရို့ အမူအရာ လေးတွေ နဲ့ Tik Tok လေး ဆော့ပြီး သူမ ရဲ့ Tik Tok acc လေးမှာ တင်ပေးလာခဲ့ ပါ တယ်..။ ဆောင်းယွန်း ဟာ မြန်မာ ဆန်ဆန် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ရိုးရိုး ယဉ်ယဉ် လေး ဝတ်ကာ အလှ ကြီး လှနေတာ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ကဲ …. ပရိသတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် ပါ တယ် နော်…။
မင်းသမီးချော လေး ဆောင်းယွန်းစံ ကတော့ အနု ပညာ လောက မှာ နေရာ တစ်ခုကို ရယူ ထားနိုင် ခဲ့ပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင် တဲ့ ဇာတ် ကားတိုင်း မှာ အကောင်းဆုံး နဲ့ အပီပြင် ဆုံး သရုပ်ဆောင် နိုင်တာ ကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေး ချစ်ခင်မှု ကို အချိန်တို အတွင်းရရှိ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ချစ်စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ အပြုံးလေး တွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင် ခဲ့ တဲ့ သူမ ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ မှာ လည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင် နေတာ ဖြစ်သ လို ကြော်ငြာတွေ လည်း ရိုက်ကူး နေတာ ဖြစ်ပါတယ် နော်..။
ဆောင်းယွန်းစံ ဟာ ရွှေကြို တစ်ယောက်အနေ နဲ့ အနု ပညာ လမ်းကြောင်းပေါ် စတင် ရောက်ရှိခဲ့ တာ ဖြစ်ပြီး ကျစ်လျစ် သွယ်လှတဲ့ ဘော်ဒီအချိုး အစား လေး ဟာလည်း ပုရိသတွေ ရဲ့ အသည်းစွဲ ပါပဲ နော်..။ သူမ ဟာ အားလပ် ချိန်လေး တွေမှာ ဆိုရင် လည်း Tik Tok ဗီဒီယို တွေကို ရိုက်ကူး လေ့ ရှိပြီး ချစ်စရာ အမူအရာ လေး တွေကြောင့် ပရိသတ် အားပေးမှု ရရှိနေ တာ ပါ..။
အခု ဆိုရငျ လညျး ဆောငျးယှနျး ဟာ ရှုတငျနားတုနျး လေးမှာ ခဈြစရာ မခို့ တရို့ အမူအရာ လေးတှေ နဲ့ Tik Tok လေး ဆော့ပွီး သူမ ရဲ့ Tik Tok acc လေးမှာ တငျပေးလာခဲ့ ပါ တယျ..။ ဆောငျးယှနျး ဟာ မွနျမာ ဆနျဆနျ ဖကျရှငျလေးနဲ့ ရိုးရိုး ယဉျယဉျ လေး ဝတျကာ အလှ ကွီး လှနတော ဖွဈပါ တယျ..။ ကဲ …. ပရိသတျ တှေ အတှကျ ပွနျလညျ မြှဝေ ပေးလိုကျ ပါ တယျ နျော…။
မငျးသမီးခြော လေး ဆောငျးယှနျးစံ ကတော့ အနု ပညာ လောက မှာ နရော တဈခုကို ရယူ ထားနိုငျ ခဲ့ပွီး ပါဝငျသရုပျဆောငျ တဲ့ ဇာတျ ကားတိုငျး မှာ အကောငျးဆုံး နဲ့ အပီပွငျ ဆုံး သရုပျဆောငျ နိုငျတာ ကွောငျ့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ အားပေး ခဈြခငျမှု ကို အခြိနျတို အတှငျးရရှိ ခဲ့တာ ဖွဈပါ တယျ..။ ခဈြစရာ ကောငျးလှနျး တဲ့ အပွုံးလေး တှေ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားနိုငျ ခဲ့ တဲ့ သူမ ကတော့ ဇာတျလမျးတှဲတှေ မှာ လညျး ပါဝငျ သရုပျဆောငျ နတော ဖွဈသ လို ကွျောငွာတှေ လညျး ရိုကျကူး နတော ဖွဈပါတယျ နျော..။
ချစ်တဲ့ ပရိသတ် တွေကို Mask တပ် ကြဖို့ ဆက်ဆီကျတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ တိုက်တွန်း လာတဲ့ မော်ဒယ် မျက်ဝန်း
ဒီလို အကြောင်းအချင်း အရာတွေကြားရတော့ စိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်ရတဲ့ စိုင်းဆိုင်မောဝ်အကြောင်း